MM Abiy hidhamuu miseensota paartileerratti maal jedhan?
Dhimma hidhamuu dursitootaa fi miseensota dhaaba siyaasa irratti gaaffilee dhiyaataniif deebii kan kennan MM Abiy, namootni siyaasaa hiyyeessa rukkuchiisaa fi miidhaaf saaxilaa gaafa seeraan gaafataman mormuun sirrii mitii jedhan.
”Namni biraan du’ee, namni biraan hidhamee isin osoo hin hidhamiin osoo hin du’iin, osoo hin dhiigiin aangoo argachuu hin yaadiinaa’’ jedhan.
”Amma wanti rakkoo ta’e akka feenetti wal-nyaachifna garuu nuti hidhamuu hin qabnu sababni isaas nuti miseensa paartiiti, namoota tv irratti bekamu kan jedhuudha” jedhan.
”Wal-nyaachisuuf diinni adda dureen nuyi kan hidhamuu qabu, garuu nama biraati jennee amanna.’’
Yeroo namni kaan hidhamu olaantummaa seeraa kabachiisuu jechaa ofii isaanii yoo hidhaman dogongora jechuun sirrii miti hunduu seera kabajuu qaba jedhan.
Marii kanarrattis mana maree waloo paartilee keessaa namootni torba filatamanii ajandaawwan ijoo adda baasuun fuula durattis dhimma waliigaltee biyyaalessaarratti mariyachuuf waliigalamuu Prof. Mararaafi obbo Adaaneen nuu mirkaneessaniiru.
MM Abiy Ahimad hooggantootni paartilee mormituu waliin dhimmoota haala siyaasaa yeroo fi dhimma ‘’tokkummaa biyyaalessaarratti’’ xiyyeefate Roobii kaleessaa marii gaggeessaniiruu.
Marii kana irrattis hooggantootni dhaabbilee siyaasaa mormituu kan hirmaatan yoo ta’u, dhimmoota ijoo lamarratti xiyyeeffachuun kan gaggeefame ta’u odeeffannoon Wajjira MM irraa argame ni mulisa.
Inni jalqabaa waa’ee dhimma biyyaa irratti mari’achuuf gara fulduraatiif waltajjiin paartilee siyaasaa akka qophaa’uu kallattii kaa’uu yoo ta’u, dhimmi lammaffaa ammoo dhimmoota misoomaa, nageenyaafi tasagabbii irratti mari’achuu ture.
Ajandaawwan ijoo haala yeroorratti kana keessaa tokkoo ammoo dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa bishaaniin guutuu eegaluun akka biyyattii wanta isaan gammachiise akka ta’e paartileen siyaasaa ibsaniiru.
Waa’ee to’annoo Covid-19, dhimmoota filannoo, nagaanyaafi tasgabbii fi ijaarsa dhaabbilee ilaalchisuun mariin gaggeefameera.
Mata duree haala yeroo keessaa oolaantummaa seeraa kabachiisuuf hojiin mootummaan hojjechaa jiru irratti yaadotni gamaafi gamanaa irratti dhiyaachuu isaa gabaasaalee miidiyaalee biyya keessaa irraa hubatameera.
Ministirri Muummee Abiy Ahimad ammoo marsaalee miidiyaa hawaasaa irratti hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu miseensota paartii fi qaama mootummaa osoo hin foyiin kabachiisuun kutannoo mootummaa isaanii ta’uu ibsaniiru.
Dhaabbiilee siyaasaa waltajjii kanarratti hirmaatan keessaa BBC’n hooggantoota dhaaba KFO fi dhaaba Paartii Diimookraataawaa Itoophiyaa dubbiiseera.
”Marichi akka nama quubsutti hin deemne”
Dura taa’aa KFO kan ta’an Prof. Maraaraa Guddinaa waltajjiin kun kan bifa lamaan ilaalu ta’u dubbatu.
‘‘Lachuu ta’uu danda’a. Anaafis quubsaa miti. Marichi akka nama quubsutti hin deemne. Garuu yoo itti deemamee gara waliigaltee biyyaatti deemuun danda’ameef, wanna gaarii ta’uu danda’aa.’’
Dhaabbilee siyaasaa mormituu dura taa’aa itti aanaa isaa dabalatee hooggansaa fi miseensotni hedduun kan jalaa hidhaman hoogganan kan Prof. Mararaan, gara marii biyyaalessa fi waliigaltee biyyatti ce’uuf garuu namootni siyaasaa hidhaman gadhiifamuutu irra jira yaada jedhu qabu.
Marii kaleessaarratti barbaachisuummaa tokkummaa biyyaa uumuu jedhurratti haasa’anii, dhimma yeroo irratti ejjoonnoo dhaabaa isaanii ibsuuf carraa dhorkamuu BBC’tti himaniiru.
Walgahii kanarratti ‘‘paartileen mootummaan deegaraman hedduun ture’’ jedhanii, waayee Ajjeechaa Art. Haacaaluu Hundeessaafi hidhaa waahillan isaanii kaasuuf wayita jedhan carraa dhorkamuu dubbataniiru.
Namoota siyaasa biyya kanaa keessatti warri beekaman kan hidhaa jiran yoo hiikaman malee, isaaniin achitti dhiisanii waliigaltee bu’aa fidu argachuun ni rakkisaa ejjennoo jedhu qabachuu Pro. Mararaan dubbataniiru.
Ministirrii muummee fi paartileen mormituu gariin mootummaan olaantumma seeraa mirkaneessuuf qaama seera cabse kamuu gaafachuu qaba ejjennoo jedhu qabaachuu marii kanarratti ibsaniiru.
Haaluma kanaanis paartilee Oromiyaa keessatti socho’an keessaa tokko kan ta’e Koongireesii Biyyaalessa Oromoo bakka bu’uun waltajjicha irratti kan dubbatanii turan Obbo Tolasaa Tasfaayeen, jijjiiramni akka dhufu hawwaa turre erga dhufee maaliif nagaa dhabne gaaffii jedhurratti yaada itti aanu kennaniiru.
Rakkoo nageenyaa erga jijjiiramaa dhalateef sababni gartuuleen jijjiiramichi itti dhufe fi kanneen hokkoratti fayyadamuun aangoo qabachuu barbaadan biyyaa jeeqaa jiraachuu dha jedhan.
Uummatnis waggoota lamaan darbaniif mootummaan maaf callise, maaliif olaantummaa seeraa hin kabachiisu jechuun gaafachaa ture kan jedhan obbo Tolasaan, ammas mootummaan hojii olaantummaa seeraa cimsuutti dammaquu qabaa jedhan.
”Biyyi nagaa qabaattee akka itti fuftu dhaabbileen mormiitus nageenyaaf abukaatoo haa taanu, nageenyaaf haa duunus” jedhan.
Pro. Maraaraa gama isaanii dhimmi oolaantummaa seeraa kabachiisuu kun amma wantoota rakkoo ta’an keessaa isa tokkodha jedhu.
“Yaadni mootummaan kun dantaa siyaasaaf qopheesse malee furmaataaf miti kan jedhus lakki marii dhugaa furmaata kaahuuf kan jedhutyis hubatamuu danda’a jedhan”
MADDA SUURAA,WAAJJIRA MM
‘’Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisaa jira kan jedhan jiru, olaantummaa seeraa kan diigaa jiru mootummaadha warri jennus jirraa’’ gaaffiin kun akka ta’utti ilaalamee furamuu qabaas jedhaniiru.
Fakkeenyaaf paartii biyya bulchaa jiru keessa qaamonni nama sanyiidhaan walitti buusan jiraachuu, isaaniis beeku nutis beekna jedhan.
Manni murtii bilisa ta’ee hojjechaa jiramoo hin jiru, qaamni nagaa biyya kanaa yeroo ragaa guuru bilisa ta’ee walitti qaba kan jedhuufi naannoo sanitti wal amantaan hin dhufu taanaan rakkoodhas jedhan.
Dhimma waliigaltee biyyaalessaa fiduu irratti mootummaafi dhaabbileen siyaasaa biroonis kutannoon hojjechuu qabu ejjennoo jedhu qabu.
Dhaabbilee siyaasaa biroo mariicha irratti hirmaatan keessa dhaaba Paartii Diimookraataawaa Itoophiyaa kan hundeessaan isaa obbo Lidatuu Ayaaleew jala hidhame ni argama.
Dura ta’aan dhaabichaa Obbo Adaanee Taaddessees ‘‘qaamni seera cabse to’annoo jala maaliif oolaa maaliif himatama koomii jedhu hin qabnu; garuu mootummaan maqaa olaantummaa seera kabajjiisuu jedhuun doorgomtoota isaa of biraa maqsaa jiraa’’ jedhan.
MM Abiy waggaa lama dura wayita gara aangootti dhufan mootummaan ammaan booda qoratee hidha malee hidhee hin qoratu isa jedhanii turan yaadachuun, sirni amma jiru gama kanaan adeemsa waggoota 27 darbanii itti fufsiisaa jira jechuunis komataniiru.
Mootummaan afuura mariiwwan gabaasa miidiyaaf qofa jedhee waamuufi raawwachiisuu keessaa osoo bahee wayyas jedhan.
”Maaliis ta’u maal garuu dhaabni isaanii walatajjiiwwan marii kamuurratti argamee yaadaa fi eejjennoo isaa ibsuurraa boodatti akka hin jenne” himan.
Sirni kanaan dura tures akkasuma marii jedhee walitti qabee osoo hin dhagahiin waan inni fedhu qofa gochaa mormiidhaan aangoo gadhiise kan jedhan Obbo Adaanan, ammas mootummaan kun adeemsa walfakkaaturra imaluun bu’aa walfakkaataa fidaa jedha.
‘‘Kan wayyuu biyyi koo Itoophiyaan marii kanarraa bu’aa akkanaa argatti jedhee marii dhugaa bu’aa qabu gochuudha.’’
Obbo Adaaneen walatajjii kanarratti ”ejjennoo qabsoo karaa nagaarratti qabnuufi taatee tibba darbeen wanti hooggansa keenyarratti raawwatame akkasumas namoota siyaasarratti raawwatamaa jiru kan nu yaaddesse ta’uu ibsineerra” jedhan.
Wal dhabdee paartii Badhaadhinaafi TPLF gidduutti dhalateen akkasumas adeemsa filannoo yeroo biratti dabarasuu akka biyyatti deemameen garaagartummaa baldhatee fi ilaalcha MM dhimma kanarratti qaban tokkummaa biyyaaf yaaddessaa ta’uu marii kanarratti akka ka’es himaniiru.
‘‘Humni jijjiiramaa Abiy Ahimad tokko dhiisee tokko rarraafatee ta’uu hi qabu hunda hammacahuufi mariin rakkoo kan furu ta’uu qaba.’’
Haalli mootummaan federaalaa naannoo Tigraay ittiin qabaa jiru gahaafi sirriidha jennee hin amannus jedhaniiru.
Previous Teknolojii ‘E-learning’:Sirna baruufi barsiisuu ammayyaa
Next Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii ejjennoo naannoo Tigraay ilaalchisee qabu roga gaariitti jijjiireera